Taageerayaasha kooxda Liverpool oo helaya war farxad leh ee ku saabsan Virgil van Dijk – Gool FM
(Liverpool) 20 Nof 2020. Daafaca kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Holland ee Virgil van Dijk ayaa horumar fiican ee caafimaad ka sameeyay safarkiisa uu kaga soo kabanayo dhaawacii ka soo gaaray Jilibka.
Warbixinada qaar ayaa waxay tilmaamayaan in Daafaca kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Holland ee Virgil van Dijk uu ka maqnaan doono garoomada inta ka dhiman xilli ciyaaredka.
Sida laga soo xigtay warbixin uu daabacay wargayska “Daily Mail” ee dalka England Virgil van Dijk ayaa bilaabay tababar khafiif ah uu ku soo kabanayo, taas oo calaamad fiican u ah in safarkiisa soo kabashada inuu si fiican ugu socon doono qorshaha loo dejiyay.
Warbixinta ayaa waxay intaas ku sii dartay warka ku saabsan in Virgil van Dijk uu bilaabay tababar khafiif ah uu ku soo kabanayo ay dhiiragelin doono kooxda Liverpool, oo ku jirta dhibaato weyn oo dhanka daafaca ah sababo la xiriira sidoo kale dhaawacii soo gaaray Joe Gomez, kaasoo isna la sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
Kaliya maahan Man United… Kooxo waa weyn ee Premier League oo raacda ugu jira adeega Sergio Ramos